Waan tageersanahay BAAQA MAXAMED XAASHI CILMI | Berberanews.com
Home QORMOOYIN Waan tageersanahay BAAQA MAXAMED XAASHI CILMI
Waan tageersanahay BAAQA MAXAMED XAASHI CILMI
Mayar Selteco iyo Golaha Deganka Hargaysa waa in ay sidaa nagu dhaafan.
Reer Hargaysa badankooda way tageersan yihiin hadalka Maxamed Xaashi Cilmi, waa in aan loo ogalaan in ay mar labad isa soo sharaan Mayar Selteco iyo Golaha Deganka Hargaysa. HADDII SOMALILAND CADAALADI KA JIRI LAHAYD. KOOXDANI BADANKOODI MADHEERA AYAA LOO TAXAABI LAHAA, EE MAR LABAAD ISMAY SOO SHARAXEEN.
Hargaysi waa casimada Somaliland, lakiin sida ay tahay manta caasimada iska daaye, magaalo laguma magacabi karo. Waayo, adeegyada ay magaalo leedahay oo dhan way ka aradan tahay. Magaalada Hargaysi waxay ja’isida ku qadan lahayd nidam xumada iyo wado xumada. Xashiishkii ayaa meelkasta buux dhaafiyay, adhiga, lo’ada, Geela, bisadihii, dadkii iyo baabuurti ayaa meel ay kala maraan la’. Magalada Hargaysi waxay noqotay Dulcad oo fooqaq laga dhisay. Haddaba, haddii reer Hargaysa diidi wayan in mar labada Selteco iyo golaha deganka ee magaladani dayacay isa soo sharaxaan, marka waxay tasi ka turjimaysa in ayna danayni wanaaga magaladooda ay ku noolyihiin. Sida Dulcad looga guuray ayaa looga guuri doona. Somalilanda casimada u noqon mayso, cida danbe oo maal-gashanaysa haba sheegin.
Nasiibdaradu waxay tahay magaalada Hargaysi way haysata dhaqaale lagu horumariyo oo lagu hirgaliyo wadooyin waawayn ooy baabuurta maraan oo labadii geesood oo dadku marana leh (ama Side-walks), biyo mareeno (drainage system), tuunbooyinka bulaacada qaada (sewerage system) iyo Jardiinooyin dadku ku nastan. Lakiin Mayar Solteco iyo golaha deganka ey u doorteen in horumarka magalada ka shaqeeyan waxay ku mameen siday dhulka danta qaran iyo hantida ummada u boobi lahaayeen. Wax kaliya ee yaqaanan waa boobo.
Haddaba, haddii Selteco iyo golaha deganka ee Hargaysi inuu damiir leeyihiin, mar labaad is-may sharaxeen, waxay ka xishoon lahaayeen dadka ay hantidooda dhaceen, magaladoodan dayaceen. Waxaase isaga ka liita kuwa u olalaynaya iyo waliba xusbiga u ogalanaya inuu ummada mar kale hor yimadan.
Xusbiga cod ka doonaya dadka Somaliland, khasatan reer Hargaysa ma soo sharaxayo Selteco iyo golaha deganka Hargaysa. Waayo Selteco waa shakhsiga loogu necebyahay magalada Hargaysa.
Lacagtii XAARANTA ah ee uu Selteco ummada ka dhacay, wuxuu ku soo dhaq-dhaqaajiyay odayaal xaaran quutayaala. Odayaashana waxay Madaxwaynaha ku qanciyeen inuu mar kale Selteco soo sharaxo. Haddaba, haddii Madaxwayne Muuse Biixi ka ogalaado oday-beenalayaashani. Marka Madaxwyne Muuse godab ayuu ka galayaa ummada Somaliland, khasatan dadka Reer Hargaysa ee madaxwaynaha ka dhigay. Wuxuuna u cadeeyay in aanu dan ka lahayn horumarka Caasimada Hargaysa iyo dalka toona.
Haddii xusbiga Kulmiye musharax ka dhigto Selteco, musharaxiinta Golaha Wakiilada iyo degaanka waa in xusbiyda kale iska sharaxaana. Waayo Kulmiye danta dalka iyo dadkani ma wado.
Waxuuna Madaxwayne Muuse Biixi ummada Somaliland u cadaynayaa inuu dalacsiinayo kuwa ummada waxba u qaban ee hantidoodana dhaca. Taasina waxay nusqaan ku noqon doonta musharaxiinta xusbiga Kulmiye iska sharaxi doona, dadku waxba ka dhagaysan maayan. Waxaa loo arki doona kuwa sida Selteco waxba u qaban doonin ee doonaya inay hantida ummada dhacan. Sida daradeed, musharaxa doonaya in dadku soo doortan waa in ayna Xusbiga Kulmiye iska soo sharaxayaan.
Qudbadii ugu danbaysay Madaxwaynu Muuse Biixi dadka Somaliland kula hadlay waxuu yidhi:
‘Iminka ayaad fursad haysatan, ee musharaxiin fiican doorta si aydaan hadhow u cabanin.’ Haddaba, mudane Madaxwayne side ayay isku qabanaysaa waxaan mar labad idiin soo xulayaa dadkii beenta idiin sheegay ee hantiddiina dhacay iyo dad fiican doorta.
Mudane Madaxwayne haddii hadalkaasi kaa dhab yahay ummada ha u soo sharixin Selteco iyo kuwa la midka ah. Haddii kale hadalkaasi waxaa uu noqon doona hadal aad iska tidhi ee aanad aaminsanayn.
Midna dhaci mayso in hantida ummada laga boobay in dadka lagu iibsado, ooy kuu codeeyan. Dadka Somaliland way barteen siday looga aarsado kuwa hantidooda booba ee hadana cod ka raba. WAA KA-CUN OO KA-CODEE. Teeda kale, dadka reer Hargaysa way ka koreen BEENTII loo sheegi jiray. WAXAA LA YIDHI MAR I-DEGE ILLAHAY HA DAGO, MAR LABAAD I-DEGENA ANIGA AYAA IS DAGAY. Xikmad kalena waxaa tidhaa “QOFKA MUUMINKA AH HAL GOD LABA MAR LAGAMA QANIINO”. Marka dadka Reer Hargaysa mar ayay qaldameen ee mar labaad qaldami maayan.
Madaxwayne Muuse Biixina waxaa uga digayaa inuu Selteco dadka Hargaysa ku soo celiyo. Doorashayinka Somaliland laga qabtay xusbiga Kulmiye ayaa codadka ugu badan ku guulaysan jiray. Lakiin haddii Xusbiga Kulmiye Selteco soo sharaxo, Reer Hargaysa Xusbiga Kulmiye dhabarka ayay u jeedin doonan, Madaxwayne Muusana mar labaad madaxwayne u dooran mayaan.
Teeda kale, haddii magalada Hargaysi sida loo maamul wax iska badali wayan, ooy magaladu heli waydo Mayar iyo Gole degan oo magalada horumarkeeda ka shaqeeya. Marka Madaxwayne Muuse Biixi cod ka heli mayo reer Hargaysa. Boqolkiiba Lixdan (60%) codadka uu Madaxwaynaha Muuse helay ee uu madaxwaynaha ku noqday waxaa uu ka helay Magalada Hargaysa. Haddaba, haddii markii hore dadku qabiil ku-codaynayeen, markanai tolayay shaqayn mayso ee dadku wax qabad ayay raban. Dawlada Hoosena waa muraayada dadku ka dalacdan waxqabadka dalka.
Previous article“Kuwa Guddida Sheeganayay Waxaan Leenahay Kaalaya arka xasuuqa dhacay.”Wasiirka W. Soomaaliya
Next articleMadaxweyne Xigeenka oo Xadhigga ka jaray Madbacad cusub oo ay ku baxday lacag ka badan 1 milyan oo dollar